UChristiane Taubira ufuna isinxephezelo seminyango yaphesheya kwezilwandle, izisulu zokuqala zobugqila - i-Afrikhepri Fondation
NgoLwesithathu, Septhemba 23, 2020
Eisazi sezomnotho, isazi sezenhlalo, owayengumphathi-jikelele weCaribbean Confederation and MP, uChristiane Taubira waphakamisa ukuthi ngonyaka we-1999 ubugqila nokushushumbiswa kuhlukaniswe njengamacala obuntu. Lesi sicelo sibonisa isigaba esibalulekile emlandweni wobudlelwano phakathi kweFrance namakoloni ayo wangaphambili, eminyakeni eyi-150 ngemuva kokuqedwa kobugqila. UChristiane Taubira ucela ukuthi kucatshangwe ukuthi kungenzeka yini ukuphindiselwa kweminyango yezilwandle zaphesheya kwezilwandle (DOM), izisulu zokuqala zobugqila nokushushumbiswa. Lesi sicelo senqatshwe yiKhomishini Yezomthetho, kepha lo mthethosivivinywa wamukelwa ngazwi linye ngabaphathi ababekhona.
“[….] Isihloko esikhulume ngaso akuyona into ebandayo yokufundwa. Ngoba kuzoba yisikhathi ngaphambi kokuba ukuthula nokuzola kufike ukuthambisa inxeba elijulile elinisela umuzwa ongafezeki, ngoba kungaba nokhahlo ukuzwa kuchazwa kumenyu izici ezithile zalokho obekuyikho usizi olude nolwesabekayo ngoba umlando awusona isayensi eqondile […] Lo mbiko awuwona umlando wokuhlaziya […]
Akuyona iskripthi se-movie eshaqisayo, ethwala ukuqoqwa kwamaketanga, izinsimbi, izikhonkwane, izikhonkwane, izikhwama kanye nezimbambo eziye zadalwa futhi zafezwa ukuze zihlanjululwe. Futhi ayikho icala, ngoba icala alinalo ifa futhi ngoba izinhloso zethu aziphindiseli. Akuyona isicelo sokuphenduka ngoba akekho ozoba nomqondo wokucela isenzo sokuzisola okujulile nokuqotho eRiphabhlikhi yezwe, okubaluleka kwakhe okusondeza ukwenqaba ukungabi nabulungisa. Akuyona umsebenzi wokusebenzisa i-cathartic (okuyinto ekhulula ngokwengqondo kulokho okucindezelekile, okudabukisayo noma okucindezelayo) ngoba ukuphikisana okusondelene kusinika kithi ukuthobeka okukhulu. Futhi akuyona inkolelo yokholo, ngoba asikafanele sikhuleke isixuku sethu sikhala. Kodwa sizobe sichaza ubugebengu, umsebenzi wokukhohlwa, ukuthula, futhi usho izizathu zokunikeza igama nesimo kule nengiso. Kusukela ekuqaleni, inkampani yabekwa uphawu lwe-ferocity. Iminyaka eyishumi nesishiyagalolunye yayanele ukuqeda ngokuphelele abahlali baseHaiti abahlali bokuqala, ama-Amerindiya. Ngenkathi kwakukhona izigidi ezingu-11 ku-Americas ku-1519, zaziyizigidi ezingu-2,5 kuphela ekupheleni kwekhulu leshumi nesithupha. Kwakufanelekile ngokushesha: kwakuyingxenye yomsebenzi wokuthuthukisa, okuhloswe ngawo ukugcina izidalwa ezingenangqondo, wafuna ukuqinisekisa ukuhlengwa kwabanye. Kwakungokomthetho ngokuqalekiswa kuka-Cham. (kubhekisela endodaneni yesibili kaNowa kanye nenzalo yakhe, okhokho ngokweBhayibheli labantu abamnyama base-Afrika abaqalekisiwe) [...] Ukuhweba nokugqila kwakunonya kakhulu. Izibalo ezithi zibafingqa zihlukumeza kakhulu.
Ku-1978, ukubuyekezwa okuphelele kokuhweba kwegqila kanye nobugqila obuqhutshwa yiFrance kuye kwasungulwa. Kubonakala njengamandla esithathu esigqila saseYurophu. Ngakho-ke uye wenza ukuhweba, lo msebenzi, lo msebenzi, lo mgwaqo onobophezela kuphela yigolide, isiliva, izinongo. Kuye kwacatshangwa emva kwabanye, nabanye, ebugqilini obangela umuntu ukuba abe yisithunjwa, okwenza kube yisilwane somthwalo nomthwalo womunye.
Olumnyama ikhodi (ngaphansi kokubusa uLouis XIV, Ikhodi eyamenyezelwa 1685, wabusa phezu kuka-isimo ebugqilini amakoloni French kanye nezimpilo izigqila abamnyama kulezi ziqhingi. It okuvunyelwe (kokuqiniswa zomthetho kwenza evumelekile (isenzo ) umkhuba ukuhweba esingunxantathu), okuyinto wahlala ngaphansi komthetho French iminyaka ecishe ibe ngu amabili eminyaka, ubeka ukuthi inceku kuyinto ifenisha kanye inceku bekhululiwe has a nenhlonipho elisebunyeni enkosini yakhe yangaphambili, ngabafelokazi, abantwana . ukuhweba ngezigqila eyathatha Emakhulwini amane eminyaka alandela, kusukela amatilosi zafika okokuqala Cape Bojador e 1416, Rio de Oro (Southern ingxenye Sahara). ngokushesha kwaba sobala ukuthi aboMdabu baseMelika ababephathwa kwalinciphisa waphakamisela yi ubugqila, ukuhlukunyezwa, basetshenziswe ngempoqo isifo, utshwala, izimpi resistor.The Dominican umpristi Bartolomé de las Casas, ngubani ezihlongozwayo ukuvikela, uphakamise ukungeniswa omkhulu A. ama-fricans, ahlonishwa ukuthi aqina kakhulu.
Abantu abayishumi nesishiyagalolunye kuya kwezigidi ezingamashumi amathathu, ngokusho kobubanzi bezazi-mlando, abesifazane, abantwana, amadoda, baye bathathwa futhi bagqilazwa futhi mhlawumbe, okungenani, izigidi ezingamashumi ayisikhombisa, uma sigcina ukulinganisa okusekelwe kulokho isigqila sifikile emazweni aseMelika, abane noma abahlanu babulawa ekuhlaselweni, endleleni eya ogwini, ezindlini zezinceku zaseGee, e-Ouidah, eZanzibar nangesikhathi sokuwela.
Ukuhweba okungunxantathu kuye kwenziwa ngasese noma esidlangalaleni ngezintshisakalo ezithile noma ngenxa yezizathu zombuso. Uhlelo lwezigqila lwahlelwa ezizungeze amasimu wombuso (umthetho oyingxenye yesizinda noma ongokwesizinda somphakathi) ochuma kakhulu noma ochuma njengalabo abefundisi nabahlali abazimele. Isikhathi eside kakhulu, kuze kube ngu-1716, izinkampani ezizimele zodwa azizange zifake eceleni izinto ezizimele (ikakhulukazi inkampani iCompagnie des indes occidentales, eyakhiwa nguColbert ngo-1664, kwabe sekuyinkampani yaseSenegalese ngo-1674. emakhulwini eminyaka asobala wokukhanya, kwakudingeka ukuvula lo monopoly. Izincwadi patent (ukufakazelwa kwasolwandle kwesimo sokuhlanzeka komkhumbi osukelayo) kaJanuwari 16, 1716 kugunyaze amachweba eRouen, eSaint-Malo, La Rochelle, Nantes kanye neBordeaux ukuhweba ngokushushumbisa, ngokumelene namakhilogremu angamashumi amabili ngekhanda ngalinye labamnyama elethwe kulezi ziqhingi nokukhululwa enteleni yokungenisa […] Lolu dlame nobudlova cishe buyachaza, ngoba ingxenye enkulu, ukuthula okuvame ukusondela futhi kuholele ekuxhumaneni phakathi kweziphathimandla zomphakathi, ezazifuna ukwenza abantu bakhohlwe nenzalo yezigqila, ezazifuna ukukhohlwa. […] Silapha ukusho ukuthi ukushushumbiswa nobugqila kuyini, ukukhumbula ukuthi ukuKhanyiselwa kwaphawulwa ngokuvukelwa kokubuswa kweSonto, ngokufunwa kwamalungelo abantu , ngesidingo esikhulu sombuso wentando yeningi, kodwa futhi ukukhumbula ukuthi, ngalesi sikhathi, umnotho wamasimu wawukhula kahle kangangokuba ukuhweba okungunxantathu kwakusazi isilinganiselo saso esiphakathi kuka-1783 no-1791. Sikhona ukusho ukuthi uma I-Afrika igxiliwe ekungayithuthukisi, futhi yingoba izizukulwane zamadodana namadodana ayo zihluthulelwe kuwo; ukuthi uma iMartinique neGuadeloupe kuncike emnothweni kashukela, kuncike ezimakethe ezivikelwe, uma iGuyana inezinkinga eziningi kakhulu ekutholeni umcebo wayo wemvelo (ikakhulukazi ngokhuni negolide), uma iRéunion iphoqelelwa ukuhweba kude kangako nomakhelwane bayo, kungumphumela oqondile wokukhethwa kukoloni kuphela; ukuthi uma ukwabiwa komhlaba nakho kungalingani, kungumphumela wokuphakanyiswa kabusha kombuso wezindlu.
Silapha ukusho ukuthi ukuhweba kwegqila kanye nobugqila kwakungubugebengu ngokumelene nesintu; [...] Le entry umthetho, leli gama eqinile, nangokunembile, izwi olusemthethweni ukulungiswa esimeme futhi ongokomfanekiso, owokuqala futhi cishe onamandla kunayo yonke. Kodwa eheha Inqubomgomo ukulungisa ikhumbula izisekelo ngokungalingani olwandle izinkampani exhumene ubugqila, kuhlanganise isinxephezelo nalezi zifiki ababelandela ukuqedwa. Iphinde eqala ukulungiswa zokuziphatha enza engena ekukhanyeni zokuchithwa yezinhlamvu ngelukwa yilabo ngokuseduze baqhelile bamela e-Afrika, i-chestnut (izigqila runaway) ehola izinhlobo ukumelana kulo amakoloni, ngu abantu bendawo kanye nezisebenzi zaseFrance, ngomzabalazo wezombangazwe kanye nesenzo sezazi zefilosofi kanye nabaqothule.
Lona (lo mbhalo osemthethweni) ucabanga ukuthi lo mkhuba uhlanganisa imizamo eyenziwayo yokuqeda ubandlululo, ukukhomba umsuka wokuxabana ngokobuhlanga, ukubhekana nokungabi nabulungiswa okwenziwe ngamanga. Kuthathwa njengokulungiswa kwamasiko, ikakhulukazi ngokulungiswa kwezindawo zokukhumbula. […] Kepha sizohamba ndawonye ngokuhlukahluka kwethu, ngoba siyalelwe ngokuqiniseka okumangalisayo ukuthi uma sehluke kakhulu, kungenxa yokuthi imibala zisempilweni nokuthi impilo inemibala, nokuthi amasiko nokwakheka, uma kuhlangana, kunokuphila okuningi nokugqama okukhulu. […] Léon Gontran Damas (1912-1978), imbongi yaseGuyan kanye nephini leSocialist laseGuyana, Co-founder wenhlangano ye-negritude no-Aimé Césaire noLéopold Sédar Senghor: bamemeza bethukuthele bethi: “Ngizizwa ngikwazi ukukhala ingunaphakade. ngokumelene nalabo abangizungezile nabangivimba ingunaphakade ukuba yindoda ”.
Ukukhuluma kuMkhandlu Kazwelonke we-18 February 1999
Izwi labesifazane - Lezi zinkulumo ezinkulu ezaziphawula umlando
21,50€ kukhona kusitoki
5 okusha kusuka ku-21,50 €
I-5 isetshenzisiwe kusuka ku-42,98 €
Thenga i-21,50 €
kusukela ngoSepthemba 22, 2020 11:42
Usuku lokukhulula 2019-03-07T00:00:01Z
Usuku lokushicilela 2019-03-07T00:00:01Z
Ingqikithi iSilekeleli Sokwazisa - Paramahansa Yogananda (Audio)